ကျွန်ုပ်၏ Blog တွင်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးမှတ်စု | Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 18, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်မကြာသေးမီလများအတွင်းအတော်လေးအာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့ပြီးရှေးရှေးများကသူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုအလွန်အမင်းကြင်နာစွာဖြင့်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ လူတွေကငါ့ကိုချီးမွမ်းပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်ယူတာဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ပို့စ်တိုင်းကိုပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုတကယ်မောင်းနှင်ခဲ့တယ်။ ငါဘလော့စတင်ကတည်းကကတည်းကကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုမင်းဒီစာကိုဝေမျှပေးရမယ်။ ဒါဟာလုံးဝငါ၏နေ့ကိုဖန်ဆင်း! ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်တစ်ခု၏မည်မျှသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုလည်းသက်သေဖြစ်သည်။ ဒီမှတ်စုမတိုင်ခင်မှာ Mitch ဟာစာဖတ်သူတစ်ယောက်ဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ သူ့မှတ်စုကိုကြည့်ပါ။
ကနေဒါ၊ Montreal ရှိ McGill တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နှင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်အွန်လိုင်းဖောက်သည်အထောက်အကူပြုကုမ္ပဏီအသစ်ကိုစတင်တည်ထောင်လိုက်သည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီ၏ဤကုမ္ပဏီအသစ်ကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဘလော့ဂ်မှသင်ကြားမှုများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါတို့ကုမ္ပဏီဟုခေါ်သည် ClixConnect အွန်လိုင်းဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့ရန်အလွန်ဆန်းသစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်တာကအခြေခံအားဖြင့်လူတွေရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတွေ့ရတဲ့ live-chat ခလုတ်များကို သုံး၍) ပြင်ပမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့မေးမြန်းနိုင်သည့်အချိန်တွင်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုတုံ့ပြန်နိုင်ပြီး၊ သူတို့မရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ call စင်တာမှလူတယောက်သည်သူတို့ကိုယ်စားမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကို 24/7/365 ဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
ဒါကတီထွင်မှုရဲ့ထက်ဝက်ပဲ။ ClixConnect ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအစိတ်အပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲတွင်နည်းပညာအသစ်ရှိပြီးသုံးစွဲသူများအတွက်အလိုအလျောက်ချက်တင်အကြံပြုချက်များပေးသည်။ သူတို့ကြည့်နေသောထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်က ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာအနီရောင်တီရှပ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့၊ အလိုအလျောက်စကားဝိုင်းပြတင်းပေါက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးသူတို့ကဘောင်းဘီတိုကိုထောက်ခံဖို့အကြံပေးလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ ၆ လလောက်ကြာအောင်ဒီစီမံကိန်းကိုစီစဉ်ပြီးကနေဒါ၊ အမေရိကန်၊ ရိုမေးနီးယားနဲ့ပါကစ္စတန်ကလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ကိုသင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသိစေချင်တယ် Martech Zone ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေရာသို့သွားရန်အမှန်တကယ်ကူညီပေးခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။
Mitch Cohen ကို
Mitchell Cohen ကို
McGill တက္ကသိုလ် BCom 2008
ငါကံကောင်းတာပဲ! အံ့သြစရာကောင်းတဲ့စာပဲ။ အဲဒီမှတ်စုကငါ့အတွက်ဘယ်လောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ နှင့်အတူကံကောင်းခြင်း၏အကောင်းဆုံး ကလစ်ခ်ချိတ်ဆက်ပါ။, Mitch! မင်းရဲ့လျှောက်လွှာကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုကူညီမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်သယ်ဆောင်သွားမှာပါ။
မေလ 18, 2007 မှာ 9: 06 AM
အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆီက လာတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့သည့် 18 လတွင် ကျွန်ုပ်၏ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ဥရောပရှိ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ သူသည် လွန်ခဲ့သော4ပတ်က လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ဤနေရာ၌ သူနှင့်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့သော PR နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးနည်းစနစ်များ သည် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြားတွင် အားကောင်းပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသော အားသာချက်များကို ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းက သူ မသိခဲ့ပါဘူး။
သူက လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ဘဝမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရာတွေ အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်လို့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
မင်းရဲ့အလုပ်က အခွင့်အာဏာပေးခံရတဲ့ Mitch လိုမျိုး တခြားသူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ငါသေချာတယ်။
မေလ 18, 2007 မှာ 9: 28 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Neil… ဤကဲ့သို့သော မှတ်ချက်များနှင့် စာများသည် မည်သည့်ဆုကြေးများထက်မဆို ပိုမိုအားရစရာကောင်းပါသည်။ ဒီလိုဖတ်ရတာ တကယ်ကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အများစုသည် မှတ်ချက်များပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
မေလ 19, 2007 မှာ 6: 34 AM
မှတ်ချက်များလက်ခံရရှိခြင်းမှ ကျွန်ုပ်ရရှိသည့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်း၏ အကျိုးအရှိဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား ပိုကောင်း၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြောင်းအရာဆီသို့ ကြိုးစားရန် ကူညီပေးပါသည်။
Doug သည် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ရရှိလာသော ထုတ်ကုန်သည် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ပင် စဉ်းစားမိပေမည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် သင့်အကြံပြုချက်များစွာကို သေချာပေါက်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယခု feedburner တွင် စာဖတ်သူ 200 (လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်) နီးပါးဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ သင့်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေလ 19, 2007 မှာ 9: 27 AM
Opal : Vegan Momma
မေလ 21, 2007 မှာ 6: 34 AM
အဲဒါက မင်းကို အံ့သြစရာလို့ ငါသိတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော မှတ်ချက်များသည် သင့်အား အမြဲတမ်းထူးခြားစေပါသည်။
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ပုန်းအောင်းနေသူ အများအပြား ရှိပြီး တော်တော်များများက ကျွန်တော့်ကို အီးမေးလ်ပို့ပြီး ရံဖန်ရံခါ ထွက်လာကြပြီး၊
“ပြောပါ” လို့ တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ မှတ်ချက်တွေက လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေထက် ကျွန်တော့်အပေါ် ပိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ 🙂
လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်က မင်းရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ငါရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ ပို့စ်တော်တော်များများကို ငါဖတ်ပြီးပြီ၊ ငါ မင်းကို bookmarked/linked လုပ်ထားပြီး အချိန်ပိုရလာတဲ့အခါ ငါပြန်လာလို့ရပြီ။
ငါ့ဘလော့ဂ်ကို နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အလေးအနက်တွေးထားပြီး မင်းရဲ့လိုမျိုး ဝဘ်ဆိုဒ်တွေက အချက်အလက်တွေက ငါ့အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးမှာ သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ရေးနေတာ နှစ်နှစ်ကျော်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေက ပြောင်းလဲနေပါတယ်။
မေလ 21, 2007 မှာ 6: 46 AM
ကျေးဇူးပါ Vegan Momma။ မင်းရဲ့ဆိုဒ်ကိုလည်း ငါစစ်ဆေးမယ်။ ငါ Vegan မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အပ်နှံမှုအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် လေးစားမှုရှိတယ်။ ပြီးတော့ မင်းဟာ အခက်ခဲဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ အမေတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က Single အဖေဆိုတော့ ဦးထုပ်နှစ်ခုလုံးဝတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ငါ မင်းကို တစ်ခုခုကူညီနိုင်ရင် ငါ့ကို အကြောင်းကြားပါ။
မေလ 21, 2007 မှာ 7: 06 AM
ငါသေချာပေါက်မေးခွန်းတွေမေးမယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘာမေးရမှန်း မသိတော့ဘူး! ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်သစ်လွင်နေသေးသည်။ နားထောင်တယ်၊ စာဖတ်တယ်၊ သင်ယူတယ်။
ကျွန်တော်က single mom တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဦးထုပ်နှစ်ခုလုံးဝတ်ဖို့ နင်ဘာကိုဆိုလိုလဲ ငါသိတယ်။ 🙂